Iimuvi ezi-6 onokuzibona phambi kokuphela kukaJuni | Bezzia
Iimuvi ezi-6 onokuzibona ngaphambi kokuphela kukaJuni
UMaria vazquez | 18/06/2022 22:00 | Iindaba
Ukulwa namaqondo obushushu aphezulu esinawo kule mihla, asinakucinga ngesicwangciso esingcono kunoko zimela kwindawo yemiboniso bhanyabhanya. Umboniso bhanyabhanya omnandi, upholisa umoya… Akukho nto yimbi efunekayo! Ezi filimu zintandathu zikhutshwe kule mpelaveki okanye ziza kuba zezi zilandelayo. Ziphawule!
1 Ubunzima obunganyamezelekiyo betalente enkulu
2 Asizukubulalana ngemipu
3 kufuneka uze kuyibona
4 UCamila uyaphuma namhlanje ebusuku
6 Ifowuni emnyama
Ubunzima obunganyamezelekiyo betalente enkulu
Yeluswa nguwe UTom Gormican
Kudlalwa uNicolas Cage, uPedro Pascal kunye noAlessandra Mastronardi
Ibali ulandela umdlali uNicolas Cage, onqwenela ukufumana indima kwi-movie ye-Quentin Tarantino. Ngaphezu koko, unobudlelwane obunzima kakhulu nentombi yakhe ekwishumi elivisayo yaye usematyaleni kakhulu. La matyala amnyanzela ukuba abonakale kumsitho womhla wokuzalwa kukasozigidigidi waseMexico othanda umsebenzi walo mdlali kwiifilimu zakhe zangaphambili, ngeenjongo zokumbonisa umbhalo ebesebenza kuwo.
Njengoko edibana nendoda, i-CIA imxelela ukuba i-billionaire ngokwenene Inkampani yeziyobisi kingpin oxhwile intombi yomgqatswa wobumongameli baseMexico. Emva koku, uqeshwa ngurhulumente wase-United States ukuba afumane ulwazi.
Yeluswa nguwe UMaria Ripoll
Kudlala uIngrid Garcia Jonsson, uElena Martin, uJoe Manjon
Ngelixa idolophu ilungiselela ukubhiyozela umthendeleko wayo oyintloko, iVirgen del Mar, uBlanca uzama ukuqinisekisa ukuba i-paella yokuqala ayilungiselelayo ebomini bakhe iphelele. Ukwazile ukuqokelela abahlobo bakhe ubomi emva kweminyaka singabonani. Bambi bazama ukungena esixekweni, abanye basemzini, omnye wahlala ezilalini. Bonke bakwiminyaka yabo yamashumi amathathu kwaye bavakalelwa kukuba ubutsha babo buyaphela.
Ubomi babo buhamba phakathi kokungakhuseleki emsebenzini, ukungazithembi kunye isiqalo esiqhubekayo. I-paella ihlala kude kube sebusuku, phakathi kokutyhilwa kweemfihlelo, izinyeliso kunye nokungaqondi kakuhle. Kwaye, ekugqibeleni, i-verbena ifika: ubungqina bokuthi ihlabathi liyaqhubeka lijika ngelixa ubomi be-protagonists bubonakala buhamba kwaye kunanini ngaphambili baya kufuna omnye nomnye ukuze baqhubele phambili.
kufuneka uze kuyibona
Yeluswa nguwe UJona Trueba
Kudlalwa uItsaso Arana, Francesco Carril, Irene Escolar
Iibini ezimbini zabahlobo badibana kwakhona. Baphulaphula umculo, bathetha, bafunde, badle, bahambe, badlale i-ping-pong ... Isenokungabonakali njengento eninzi kwi-movie, yingakho "kufuneka uze ukuyibona".
UCamila uyaphuma namhlanje ebusuku
Yeluswa nguwe U-Ines Maria Barrionuevo
Kudlala uNina Dziembrowski, Maite Valero, Adriana Ferrer, Carolina Rojas, Federico Sack kunye noGuillermo Pfening
UCamila ujongeka kwanyanzeleka ukuba bafudukele eBuenos Aires xa umakhulu wakhe egula kakhulu. Ushiya ngasemva abahlobo bakhe kunye nesikolo samabanga aphakamileyo esikhululekileyo kwiziko labucala lemveli. Ukuba nomsindo kukaCamila ngaphambi kwexesha kuvavanywa.
Yeluswa nguwe UBaz Luhrmann
Kudlalwa uAustin Butler, uTom Hanks kunye no-Olivia DeJonge
ifilimu yebhayografi kubomi kunye nomculo ka-Elvis Presley, egxile kubudlelwane bakhe obunzima kunye nearhente yakhe engaqondakaliyo: uColonel Tom Parker. Lo mboniso bhanyabhanya uphonononga kutshintsho oluntsonkothileyo phakathi kukaPresley noParker kwisithuba esingaphezulu kweminyaka engama-20, ukusuka ekunyukeni kukaPresley kudumo ukuya kutsho kwinkanyezi yakhe engazange ibonwe ngaphambili. Konke oku kusemva komkhusane wokuzivelela kwenkcubeko kunye nokukhula kwezentlalo e-United States. Embindini wolo hambo ngomnye wabantu ababalulekileyo nabanamandla kubomi buka-Elvis, uPriscilla Presley.
Yeluswa nguwe UScott Derrickson
Kudlala uMason Thames, uMadeleine McGraw kunye noEthan Hawke
umbulali lusizi uqweqwedisa uFinney Shaw, inkwenkwana eneentloni nekrelekrele eneminyaka eli-13 ubudala, aze amvalele kwigumbi elingaphantsi elingenamsindo apho isikhalo sakhe singenamsebenzi. Xa ifowuni eyaphukileyo kunye nengaxhunyiwe kwi-intanethi iqalisa ukukhala, uFinney ufumanisa ukuba ngayo unokuva amazwi amaxhoba angaphambili, azimisele ukuthintela uFinney ekubeni aphele njengabo.
Ngaba uyafuna ukubona nayiphi na kwezi bhanyabhanya? Abanye babo sele bekwithiyetha. Jonga ibhilibhodi yesixeko sakho ukuze ufumanise ukuba zeziphi iimuvi onokuzibona ngoku. Kwaye ukuba uziva uthanda ukonwabela uthotho ekhaya ngakumbi, jonga ezamva nje ukukhutshwa kweNetflix okanye HBO.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IBezzia » Iindaba » Iimuvi ezi-6 onokuzibona ngaphambi kokuphela kukaJuni